သတင်း - XY TOWERS | 500KV Transmission Line Tower တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း။
2021 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့တွင် အပြန်အလှန် စုဝေးစမ်းသပ်မှု 500 kV ဗို့အားမြင့် သွယ်တန်းထားသော တာဝါတိုင်များ တာဝါတိုင်များဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကောင်းကင်က ကြည်လင်ပြီး ကြည်လင်နေတယ်။ ပြားချပ်ချပ်ခေါင်းရင်းမျှော်စင် t ကိုပိုမိုဟန် 30 အမြင့်သည် မျှော်စင်အောက်ခြေရှိ ငွေရောင်တောက်ပြောင်နေသည့် ဆလင်ဒါပုံသဏ္ဍာန်မျှော်စင်ခြေထောက်များ၏ အဓိကပစ္စည်းများကို တိကျစွာပစ်ချရန်အတွက် ရှည်လျားသောအလုံးအရင်းကို ဆန့်ထုတ်ထားသည်။ "မျှော်စင်အခြေစိုက်စခန်းကို ရပ်လိုက်ပါ!" နေရာထိုင်ခင်းတပ်မှူး၏ အမိန့်ဖြင့် တည်ဆောက်သူများသည် ကျောက်ဆူးများ ချိတ်ဆွဲရန် အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပြီး မျှော်စင်ခြေထောက်၏ ပထမအပိုင်းကို လွှင့်တင်ခြင်း အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။
ယခုအကြိမ် တပ်ဆင်ထားသော သရုပ်ပြတာဝါသည် 500 kV Single Circuit ဝိုင်ခွက်စတီးပိုက်တာဝါဖြစ်ပြီး အလေးချိန် 28 တန်နှင့် အမြင့် 48 မီတာရှိသည်။
အလုပ်သမားများ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့် တာဝါတိုင်၏ အရည်အသွေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးအချိန်ဇယားသည် ကောင်းမွန်မြန်ဆန်သည်။ Tower Assembly သည် တပ်ဆင်ခြင်း၏ အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကို ဘေးကင်း၍ ယဉ်ကျေးသော ဆောက်လုပ်ရေးစံနှုန်းများနှင့်အညီ စီစဉ်ပြီး "အတွင်းပိုင်း တာဝါတိုင်ကရိန်း တပ်ဆင်ခြင်း" "တာဝါတိုင်များ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စိုက်ထူခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး အစီအစဥ်နှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အစီအမံများ။ တာဝါတိုင်များ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စိုက်ထူခြင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကို ရည်မှန်းပြီး နည်းပညာများစွာ၊ အမြင့်မှပြုတ်ကျသည့်ကိရိယာကဲ့သို့သော အတိုင်းအတာများကို တပ်ဆင်ထားပြီး 500 kV တာဝါတိုင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စိုက်ထူခြင်းဆိုင်ရာ အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်များ ဘေးကင်းကာ ယဉ်ကျေးပြီး အရည်အသွေးမြင့်တည်ဆောက်မှုကို သေချာစေရန် ဆောက်လုပ်ရေးတစ်လျှောက်လုံးတွင် တက်ကြွသောဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ကို အသုံးပြုထားသည်။
တာဝါတိုင်စည်းဝေးပွဲအပြီးတွင် ကုမ္ပဏီသည် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား စမ်းသပ်မှုအကျဉ်းချုပ်အား အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပထမ၊ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ပါ။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုများကို အကျဉ်းချုပ်ပြောကြားကာ ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာသည် 500kV မျှော်စင်၏ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို အကျဉ်းချုံးပြီး အကဲဖြတ်ကာ တာဝါတိုင်၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များကို နုတ်ယူကာ တိုးတက်မှုအစီအမံများကို ဆက်လက်တင်ပြခဲ့သည်။ .
500kV လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သွယ်တန်းခြင်းမျှော်စင်အား တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
ဤစစ်ဆေးမှုနှင့် အကျဉ်းချုပ်တွေ့ဆုံမှုမှတစ်ဆင့် ကုမ္ပဏီ၏ ခိုင်မာမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ နားလည်သိရှိနိုင်ကာ ကုမ္ပဏီကို ပိုမိုယုံကြည်မှုဖြစ်စေသည်။
ကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်များ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့် ဌာနအသီးသီးရှိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်၊ XY Tower ပိုကောင်းလာမယ်။
တင်ချိန်- အောက်တိုဘာ ၁၂-၂၀၂၁